Leviticus 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɛsɛ sɛ asɔfo yɛ kronkron na wɔn ho tew (1-9)
Ɛnsɛ sɛ ɔsɔfo panyin no gu ne ho fĩ (10-15)
Obi a wadi dɛm rentumi nyɛ ɔsɔfo (16-24)
21 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Wo ne Aaron mma a wɔyɛ asɔfo no nkasa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Obiara nhwɛ na wamfa efunu* angu ne ho fĩ wɔ ne manfo mu.+ 2 Nanso sɛ ɔyɛ ne busuani a ɔbɛn no pɛɛ, ne maame, ne papa, ne babarima, ne babea, anaa ne nuabarima de a, obetumi ama wɔagu ne ho fĩ. 3 Ne nuabea a ɔyɛ ɔbaabun a ɔte bɛn no na onnya nwaree nso, obetumi ama wagu ne ho fĩ. 4 Ɔrentumi mfa ɔbea a waware wɔ ɔman no mu funu ngu ne ho fĩ. 5 Ɛnsɛ sɛ wɔwerɛw wɔn ti ho,+ wotwitwa wɔn abogyesɛ ano sɛe no, anaa wotwitwa wɔn ho akam.+ 6 Wɔnyɛ kronn wɔ wɔn Nyankopɔn anim,+ na ɛnsɛ sɛ wogu wɔn Nyankopɔn din ho fĩ,+ efisɛ wɔn na wɔhyew afɔrebɔde ma Yehowa na wɔde paanoo* ba wɔn Nyankopɔn anim; enti ɛsɛ sɛ wɔyɛ kronn.+ 7 Ɛnsɛ sɛ wɔware tuutuuni bea,+ ɔbea a ɔbarima de ne ho aka no, anaa nea ne kunu agyaa no,+ efisɛ ɔsɔfo no yɛ kronkron ma ne Nyankopɔn. 8 Tew ne ho,+ efisɛ ɔno na ɔde wo Nyankopɔn paanoo brɛ no. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ kronkron, efisɛ me Yehowa a merema mo ho atew no, meyɛ kronkron.+ 9 “‘Sɛ ɔsɔfo babea dan tuutuuni de gu ne ho fĩ a, ɔregu ne papa ho fĩ. Wɔnhyew ɔbea no wɔ ogya mu.+ 10 “‘Ɔsɔfo panyin a wobeyi no afi ne nuanom mu ahwie ɔsrango agu n’apampam asra no+ ahyɛ no sɔfo* sɛ ɔnhyɛ asɔfotaade no,+ ɛnsɛ sɛ ogyaw ne ti nwi basaa, na ɛnsɛ sɛ osuan n’ataade mu.+ 11 Ɛnsɛ sɛ ɔbɛn efunu* biara ho.+ Ɔrentumi mfa ne papa anaa ne maame mpo funu ngu ne ho fĩ. 12 Ɛnsɛ sɛ ofi tenabea kronkron hɔ kɔ, na ɛnsɛ sɛ ogu ne Nyankopɔn tenabea kronkron no ho fĩ,+ efisɛ ahosohyira sɛnkyerɛnne, Onyankopɔn srango+ no wɔ no so. Mene Yehowa. 13 “‘Ɛsɛ sɛ ɔware ɔbaabun.+ 14 Ɔbea kunafo, nea ne kunu agyaa no, ɔbea a ɔbarima de ne ho aka no, anaa tuutuuni de, ɛnsɛ sɛ ɔware wɔn mu biara. Mmom ɔnware ne man muni a ɔyɛ ɔbaabun. 15 Ɛnsɛ sɛ ogu n’asefo* ho fĩ wɔ ne man mu,+ efisɛ me Yehowa na merema ne ho atew.’” 16 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 17 “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘W’asefo* awo ntoatoaso nyinaa mu no, ɛnsɛ sɛ ɔbarima biara a dɛm wɔ ne ho de ne Nyankopɔn paanoo ba n’anim. 18 Ɔbarima biara a dɛm wɔ ne ho mmma m’anim: onifuraefo, apakye, obi a n’anim adi dɛm,* nea ne nan anaa ne nsa baako ware kyɛn baako, 19 nea ne nan anaa ne nsa mu abu, 20 afũ, akwatia,* nea n’ani atɔ kyima, nea wadɔ ntwom, nea ɛyam atotɔ ne ho, anaa nea ne hwea mu aba abɔ.+ 21 Aaron aseni* biara a dɛm wɔ ne ho rentumi mma Yehowa anim mmɛhyew afɔrebɔde mma no. Ɛdɛm a ɛwɔ ne ho nti, ɔrentumi mma sɛ ɔde ne Nyankopɔn paanoo rebrɛ no. 22 Ne Nyankopɔn paanoo a efi nneɛma kronkron mu anaa ade kronkron paa+ mu no, obetumi adi bi.+ 23 Nanso dɛm no nti ɔrentumi mma ntwamutam+ anaa afɔremuka+ no ho. Ɛnsɛ sɛ ogu me tenabea kronkron no ho fĩ,+ efisɛ me Yehowa na merema wɔn ho atew.’”+ 24 Enti Mose de asɛm yi too Aaron ne ne mma ne Israelfo nyinaa anim.
^ Nt., “ɔkra a wawu.”
^ Anaa “aduan,” kyerɛ sɛ, afɔrebɔde no.
^ Nt., “wɔbɛhyɛ ne nsa ma.”
^ Anaa “ɔkra a wawu.” Hebri asɛmfua ne′phesh a ɛwɔ ha no ne Hebri asɛmfua a ɛkyerɛ “owu” no na ɛnam.
^ Nt., “anaa obi a ne hwene atwa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, ”obi a yare ama wafɔn ayɛ ketekete.”